Ny valisoan’ny fahatokian’i Elisa
"Ary niala teo Elia ka nahita an'i Elisa, zanak'i Safata, izay nampiasa omby efatra amby roa polo mikambana tsiroaroa avy, fa izy teo amin'ny roa farany indrindra; ary Elia nandroso nanatona azy, dia nanipy ny kapotiny hanarona azy" - 1 Mpanj. 19:19.
Voasarika tany amin'i Elisa ny fahalianan'i Elia. Zanakalahin'i Safata i Elisa, ary niara-niasa tany tamin'ireo mpanompo, nampiasa omby efatra amby roapolo. Sady mpanabe izy no mpifehy, ary mpiasa koa. Tsy niaina tany amin'ny tanan-dehibe be mponina izy. Mpiasa tany ny rainy, tantsaha. Lavitry ny tanan-dehibe sy ny zava-misarika ao aminy no nanabeazana an'i Elisa. Nozarina tamin'ny fahatsorana izy, sy tamin'ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny ray aman-dreniny (...) Kanefa na dia nalemy fanahy sady nalefaka aza i Elisa, dia tsy mba nanan-toetra niovaova. Nananany ny fahitsiana sy ny fahatokiana ary ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Nananany ny toetran'ny mpitarika, kanefa niaraka tamin'izany dia nananany koa ny fahalemem-panahy izay nahatonga azy ho vonona hanompo.
Nozarina hahatoky tamin'izay rehetra nataony ny sainy, nanomboka tamin'ny zavatra kely indrindra. Noho izany, raha niantso azy hanompo Azy tamin'ny fomba mivantana kokoa Andriamanitra, dia efa vonona hihaino ny feony izy. Feno harena nirenty ireo fonenana nanodidina ny fonenan'i Elisa. Fantany anefa fa mba hahazoany fanabeazana tomombana dia tsy maintsy miasa mandrakariva izy, amin'izay asa rehetra tokony hotanterahina. Tsy nanaiky ny ho latsa-danja noho ireo mpanompon'ny rainy izy raha ny amin'ny fahalalana. Nianarany ny hanompo aloha, mba hahaizany mitarika sy mampianatra ary mibaiko. — YI, 14 Aprily 1898
Nandimby an'i Elia i Elisa. Ilay nahatoky tamin'ny kely indrindra, dia hita fa nahatoky koa tamin'ny be.